Hawsha ESA Mars ayaa soo gabagabowday kadib imtixaanka labaad ee parachute - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Hawsha ESA Mars ayaa soo gabagabowday kadib tijaabadii labaad ee parachute - BGR
Dukaan hawada loo diro Mars ma fududa, laakiin ku dul saaridda meeraha cas iyada oo aan samaysan qalqallooc way adagtahay. Wakaaladda Hawada Yurub waxay si fiican u ogtahay tan Baadhitaan parachute dhawaan ah waxay kiciyeen su'aalo culus oo ah haddii howlgalka ExoMars 2020 uu ku sii jiri doono jadwalka.
Tijaabadii hore ee dhamaadkii May ayaa u muuqatay mid rajo leh laakiin ugu dambayntii waxaa loo arkaa mid guuldareystay sababta oo ah dhaawaca soo gaadhay labada parach ee waaweyn ee shaqada badankood qaban doona. Tijaabaddii ugu dambeysay waxaa ka mid ahaa naqshad cusbooneysiin ah oo lagu sameeyo nidaamka parachute, laakiin dhibaatadii ayaa mar kale dib u dhigtay.
ExoMars 2020 Lander waxaa lagu qalabeeyay nidaam qalabeysan oo parachute ah kaas oo u diraya isku xigxigta si uu u gaabiyo howlgalka una oggolaato degitaan siman. wuxuu gaadhay dusha Martian. Laba baloog oo waaweyn ayaa midba midka kale la jiidayaa mid kalena waa la jiidayaa ka dib duulimaadyo yaryar ayaa hoos u dhacay, wadar ahaan afar parachutes ayaa si isdaba joog ah loo daadgureeyay.
Tijaabadii May ayaa si balaadhan loogu saluugay, iyada oo afarta jajabinta ay u kala horeeyaan si sax ah, laakiin labada jajabinta ugu wayni way burbureen. Isla sidaas ayaa ay ahayd taxanaha cusub ee imtixaanka, laakiin ESA waxay xustay in ay u muuqato in burburka dhacay ka hor inta aan si buuxda loo soo saarin sicirka.
"Waa wax laga xumaado in la qabsashada naqshadeynta taxaddarka ee la soo saaray natiijo ka dhalatay asiibtihii imtixaanka ugu dambeysay ay naga caawin weyday inaan ka gudubno imtixaanka labaad, laakiin sida had iyo jeer ah, waxaan diirada saarnaa waxaanan ka shaqeynaa sidii aan u fahmi laheyn una saxno qaladka. si aan u bilowno sannadka dambe, ”ayuu yiri Fran saidois Spoto, ESA, hadal uu soo saaray. "Waxaa naga go'an inaan adeegsanno nidaam awood u leh inuu si ammaan ah u dhiibo shaqaalaheena dusha sare ee Mars si aan u gaarno himiladeeda sayniska ee u gaarka ah."
Kooxda ExoMars 2020 waxay hadda dib u bilaabayaan shaqadooda waxayna isku dayaan inay xalliyaan xalka. dhibaatada. Milkiilaha guriga iyo roondada la socota waa mashiinno adag, laakiin soo degitaan khasab ah ayaa sida iska cad u horseedi kara joojinta lama filaanka ah ee ESA ay qorsheysay howsha.
Iyadoo howlgalka loo qorsheeyay bilaabida dabayaaqada bisha Luulyo ama horaanta bisha Agoosto 2020, ESA waxay ubaahan doontaa xoogaa nasiib ah si loo hubiyo in taarikhdu ay si buuxda u shaqeyneyso oo loo tijaabiyo parachute system.
Source Image: NASA / JPL-Caltech / MSSS